Ahoana no azontsika ampiasana stepper maotera - China Changzhou maniry Motor
Stepper maotera fanaraha-maso dia fitaovana izay mifehy ny toerana, ny hafainganam-pandeha sy ny Torque fahazarana fotsiny ny fiara. Izany dia natao ho an'ny fanaraha-maso ny herinaratra mihetsika Motors. Manana fifindran'ny mandeha ho azy sy ny boky Hanombohana ary nijanona ny maotera, sy ny fifantenana sy ny fanitsiana ny hafainganam-pandeha.
Koa tokony handroso, na mifidy na hanova fihodinan'ny manohitra overloads sy ny hadisoany, ary hanitsy ny Torque. Maotera herinaratra tsirairay dia fitaovana amin'ny regulator izay manana andraikitra samy hafa sy ny endri-javatra. Rehefa niroso moto koa ny fanaraha-maso hanampy hiarovana ny Motors lehibe kokoa no be loatra, na ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Izany dia atao miaraka amin'ny be loatra na ny mari-pana fiarovana fifandimbiasana Tsikariny fifandimbiasana. Fuses sy ny faritra ihany koa ny onja mahasoa ho an'ny fiarovana manohitra ny amin'izao fotoana izao. Automatic maotera mpamily no namatsy amin'ny fetra Switches mba hiarovana ny milina.
Misy maotera sarotra mpanara-maso ampiasaina mba hifehy ny hafainganam-pandeha sy ny Torque Motors mifandray. Ao amin'ny mihidy-manome fitoerana fanaraha-maso, maso mahatonga ny toerany araka ny marina ao amin'ny maotera isan'ny amin'ny lathe-mibaiko. Ny moto-maso marina tsara toerana ny taom-piotazam fitaovana mifototra amin'ny baikoina mialoha ny mombamomba azy. Koa compensates ho an'ny entana samy hafa ny toe-piainana sy ny disruptive hery mba hanampy foana ny toerana misy ny fitaovana.
Motor mpanara-maso dia mifototra amin'ny zavatra efa nahafoy hatao. Misy maotera boky fanaraha-maso, maotera mandeha ho azy sy ny fanaraha-maso moto fanaraha-maso teny lavidavitra teny. Arakaraka ny mpanamboatra, maotera fanaraha-maso ihany ho voalohany, ary hijanona. Nefa maro ireo mpamily izay mifehy ny maotera amin'ny endri-javatra maro. Ny fanaraha-maso maotera herinaratra azo sokajiana araka ny karazana maotera ho noroahina na fehezina. Izany no mihetsika fanaraha-maso servo, dingana Motors, alternating amin'izao fotoana izao, na amin'izao fotoana izao, na DC AC borosy na brushless DC maharitra andriamby.